ချိန်းရှယ်ယာယခုအွန်လိုင်း Facebook, Inc. ဒီနေ့ FB ၏ရှယ်ယာစျေးနှုန်း, စတော့ရှယ်ယာစျေးနှုန်းများ Facebook, Inc. ။
FB = 294.64 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
ပျမ်းမျှစတော့ရှယ်ယာစျေးနှုန်း။ Facebook, Inc. ၏စတော့စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲသည် အမေရိကန်တဒေါ်လာ တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်ဖြစ်သည်။ Facebook, Inc. ၏နောက်ဆုံးစာချုပ်ရှယ်ယာစျေးနှုန်းကို အမေရိကန်တဒေါ်လာ ပြသထားတယ်။ 1 စတော့ရှယ်ယာ Facebook, Inc. ယခုဖြစ်သည် 294.64 ၏စတော့ရှယ်ယာ အမေရိကန်တဒေါ်လာ Facebook, Inc. ၏ ၁ စတော့ 0.01 အမေရိကန်တဒေါ်လာ အားဖြင့်မြင့်တက်လာတယ်။ Facebook, Inc. နှုန်းဟာ အမေရိကန်တဒေါ်လာ ရာခိုင်နှုန်းရာခိုင်နှုန်းရာဂဏန်း0ရာနှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကတိုးတက်ခဲ့သည်။
Facebook, Inc. ကုမ္ပဏီအတွက်ရှယ်ယာတန်ဖိုး အမေရိကန်တဒေါ်လာ
လွန်ခဲ့သောတစ်လက Facebook, Inc. ကို 342.94 အမေရိကန်တဒေါ်လာ အတွက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောသုံးလက Facebook, Inc. ကို 323.57 အမေရိကန်တဒေါ်လာ အတွက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်က Facebook, Inc. အတွက် ၀ ယ်နိုင်သည် 267.08 ၏စတော့ရှယ်ယာ အမေရိကန်တဒေါ်လာ တစ်ပတ်လုံး Facebook, Inc. အမေရိကန်တဒေါ်လာ စတော့စျေးနှုန်းကို -2.81% ကပြောင်းလဲခဲ့သည်။ -14.08% - Facebook, Inc. ရှယ်ယာစျေးနှုန်းကိုတစ်လလျှင် အမေရိကန်တဒေါ်လာ ပြောင်းလဲခြင်း။ Facebook, Inc. ၏ အမေရိကန်တဒေါ်လာ ၏စတော့စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲသည် 10.32% ဖြစ်ပါသည်။
စတော့ရှယ်ယာကိုးကား Facebook, Inc. အမေရိကန်တဒေါ်လာ
FB သို့ အမေရိကန်တဒေါ်လာ (USD)
1 FB 294.64 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
5 FB 1 473.20 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
10 FB2946.40 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
25 FB7366 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
50 FB 14 732 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
100 FB 29 464 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
250 FB 73 660 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
500 FB 147 320 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
10 Sberbank ၏ Facebook, Inc. သည်ယခုအချိန်တွင်စတော့စျေးကွက်ကျဆင်းမှုကိုပြောင်းလဲရန်2946.40 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ။ သင်ရောင်းနိုင်ပါတယ် 25 ၏စတော့ရှယ်ယာ များအတွက် Facebook, Inc. အတွက်7366 အမေရိကန်တဒေါ်လာ မင်းဝယ်နိုင် 50 ၏စတော့ရှယ်ယာ များအတွက် Facebook, Inc. အတွက် 14 732 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ဒီနေ့ 100 ၏စတော့ရှယ်ယာ Facebook, Inc. ကိုလဲလှယ်နိုင်သည် 29 464 အမေရိကန်တဒေါ်လာ 250 Sberbank ၏ Facebook, Inc. သည်ယခုအချိန်တွင်စတော့စျေးကွက်ကျဆင်းမှုကိုပြောင်းလဲရန် 73 660 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ။ မင်းရှိရင် 500 ၏စတော့ရှယ်ယာ Facebook, Inc. ပြီးလျှင်၊ ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုဗြိတိသျှအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနယ်မြေတွေကို သူတို့ရောင်းလို့ရပါတယ် 147 320 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ FB သမိုင်း
Facebook, Inc. အမေရိကန်တဒေါ်လာ ယခု 294.64 အမေရိကန်တဒေါ်လာ > 27 ဇန္နဝါရီလ 2022 အပေါ်။ Facebook, Inc. အမေရိကန်တဒေါ်လာ 05/20/2019 တွင် အမေရိကန်တဒေါ်လာ 294.63 အမေရိကန်တဒေါ်လာ Facebook, Inc. အမေရိကန်တဒေါ်လာ 05/20/2019 တွင် အမေရိကန်တဒေါ်လာ 300.15 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ပြီးခဲ့သည့်လအတွက်အများဆုံး FB / USD နှုန်းမှာ 24/01/2022 တွင်ရှိခဲ့သည်။ Facebook, Inc. အမေရိကန်တဒေါ်လာ 05/20/2019 တွင် အမေရိကန်တဒေါ်လာ 303.17 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
Facebook, Inc. ၏တစျခုမှာဝေစုကိုယနေ့ 294.64 $. ဝေမျှမယ်စျေးနှုန်း FB ယခင်ကုန်သွယ် နေ့မှစ. +0.0034% သို့မဟုတ် +0.01 USD သို့ပြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ 29 464 အမေရိကန်တဒေါ်လာ အတွက် Facebook, Inc. 100 ရှယ်ယာဝယ်ခြင်း, သို့မဟုတ် 14 732 အမေရိကန်တဒေါ်လာ အတွက် FB ၏ 50 ရှယ်ယာများကိုရောင်းချနိုင်ပါတယ်။
Facebook မှာ Inc မှကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအွန်လိုင်းလူမှုဆက်ဆံရေးကွန်ယက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ထုတ်ကုန်ရဲ့ Facebook, Instagram ကို, Messenger ကို, WhatsApp ကိုနှင့် Oculus ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်း၏ထုတ်ကုန်ကလူမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာများမှတဆင့်ချိတ်ဆက်ဝေမျှဖို့ကို enable ။